16 Kacha mma Push-Up Bras nke 2021: T-shirt, Plunge, Strapless Bras & More - Ụdị
Ihe Ndị Bụ Isi
Bras Bras nke kacha mma 16 nke dị mma nke ukwuu
Bilie, laa, na pụọ!
Ọ bụ ezie na uwe ime nwere ike bụrụ onye na -amalitebeghị ọnwa ole na ole gara aga - n'ụzọ kwere nghọta - ọ na -alaghachi azụ. Ụbọchị ndị a, onye bụ ọbụghị na-egwupụta uwe mwụda ha kacha mma, na-eyi uwe, ma na-ezute ndị enyi? (Na mgbakwunye, ịtụba ụdị anya bọmbụ, abalị abalị ma ọ bụ na ọ bụghị, nwere ike bulie ọnọdụ gị elu na mụbaa arụpụta ihe n'ụzọ ndị a na -atụghị anya ya. Nanị ịsị.) Ịga ogologo mile iji maa mma nwere ike ịpụta mmetụta ọ dịkwa mma, yabụ na ihere adịghị eme gị ichetara onwe gị na ị bụ nwa ọkụkọ ahụ n'ezie.
Ezi bra-up bra nwere ike inye aka karịsịa na nke a-ka emechara, ọ nwere ike gbanye njikere gị tank ọcha n'ime ihe na-apụta n'abalị. Yabụ kedu ihe ị ga -etinye ego na mgbakwunye ọhụrụ na mkpokọta enyi gị? Ndị na-azụ ahịa na-enwe mmetụta siri ike gbasara bras kacha mma n'ime n'elu drawer , yabụ anyị nyochara ngalaba nyocha nke ụdị dị elu iji chọpụta nke gbagoro n'elu.
Site atụmatụ ikuku na enweghị eriri ụdị na bras maka nnukwu ara, ndị a bụ bras bras kacha mma iri na isii ịzụ ahịa ugbu a.
Ngwa niile egosipụtara na Glamour bụ ndị editọ anyị họọrọ n'onwe ha. Agbanyeghị, mgbe ịzụrụ ihe site na njikọ njikọta anyị, anyị nwere ike nweta kọmpụta mmekọ.
Site n'ikike ika 1/16
Nke kacha mma maka T-shirts: Calvin Klein Liquid Touch Underwire Push-Up Plunge Bra
Isi ihe ire ere: Ọ dị mma maka olu olu dị ala na tankị na tees kwa ụbọchị, bra a na-enweghị ntụpọ nwere mmetụta na-enweghị isi, iko na-akwagharị, na olu na-amị amị maka nkwalite na ịdị mma dị mma kwa ụbọchị, kwa ụbọchị.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Enweela m braịị Calvin Klein na mbụ na -enwe obi ụtọ mgbe niile, na ụdị Liquid Touch a abụghịkwa otu! A bụ m nha 32C ma na-eyikarị ụdị bra maka ụdị mkpuchi na udi. Njirimara mmetụ mmiri na -agbakwụnye ma na -eleghị nnukwu anya na eriri dị mma n'ubu na gburugburu obi. Ihe dị larịị na -enye gị ohere iyi akwa na ọsụsọ na -enweghị ọdịdị mara mma nke lace nwere ike ịpụ. E nyere m iwu na ojii ma nwee mmasị na ya nke ukwuu ma eleghị anya m ga -enye otu iwu gba ọtọ. —Odomgirl, onye na -enyocha ya Nordstrom
$ 46 Nordstrom Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 2/16
Nke kachasị nkasi obi: Push-Up No-Wire No-Day
Isi ihe ire ere: Ekele maka nkasi obi na-enweghị waya, ihe dị oke elu, yana ntakịrị akwa maka nkwalite agbakwunyere, nke a ga-abụ ihe dị mkpa na ntụgharị ihu gị. Na mgbakwunye, ọ nwere eriri na-agbanwe agbanwe maka nhọrọ ịgba ọsọ azụ dị mma maka elu tank dị aghụghọ.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Akpọrọ m braị asị, m na -ekwukwa ya mgbe m kwuru ịkpọasị . A maara m dị ka enyi na -anaghị eyiri bra n'ihi na ahụghị m ha n'anya. Nke a bụ onye na -agbanwe egwuregwu. Enwere m ike iyi ya ụbọchị niile na -arụ ọrụ na ọbụnadị amataghị m, na anaghị m eme mkpesa maka uru ọ na -enye ụmụ agbọghọ ahụ - ọ dị m ka enwere m nsogbu ugbu a. Kpamkpam hụ ya n'anya. - Okwukwe, onye nlele na Na -ekpo ọkụ
$ 35 Na -ekpo ọkụ Zụta ugbu a
ka esi eme onwe gi ihe ngosi
Site n'ikike ika 3/16
Kachasị mma maka nnukwu ụgbọ ala: Curvy Couture Tulip Lace Balconette Bra
Isi ihe ire ere: Dị na agba aja aja, ojii, na beige, ihe mkpuchi bra a na-achọ mma na-emegide ahụ maka ịdị larịị na-enweghị silhouette n'okpuru uwe. Ogo nha bra a siri ike sitere na 34DDD ruo 46DD, nke na-akọwa ihe kpatara ụmụ nwanyị nwere nnukwu ibu ji agụ abụ otuto ya na ngalaba nyocha.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Mara mma ile anya ma mara mma iyi! Na -atọ ụtọ, na sexy ịkpụ. Enweghị m ike imehie ma ọ bụrụ na ị juputara n'uju ma chọọ ụfọdụ ozi - N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụfọdụ na -ebuli. Akụkụ ndị ahụ na-ejide ụmụ agbọghọ ahụ n'ihu na etiti, na-enye gị ọdịdị mara mma. Enwekwara ọmarịcha lace na ọdịda rhinestone n'etiti. Ị ga-enweta nkwado dị ukwuu na ezigbo nkasi obi-ihe ga-enwerịrị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile anya n'ihu. Ejiri m uwe elu na akwa yi ya, ugboro abụọ na-ele anya na-adọrọ mmasị. Bra ọhụrụ m kacha amasị! - nwanyị na -arụ ọrụ , onye nyocha na Nordstrom
$ 60 Nordstrom Zụta ugbu a
Kachasị mma maka obere ụgbọ ala: Bump It Up Underwire Push-Up Bra
Isi ihe ire ere: Nnukwu nhọrọ maka ndị na-azụ ahịa obere ego na-achọ mbuli elu, iko a kpụrụ akpụ na-akwalite nkewa ma na-agụnye atụmatụ ntụgharị n'etiti iko ọ bụla maka ọbụna karịa. va-va-voom , na -ebuli gị elu nha iko.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Ọ bụrụ na ị nwere obere obi, nke a bụ bra kacha mma. Anọwo m na -azụ ya ruo ọtụtụ afọ ugbu a, m na -enwekwa ọtụtụ ntụgharị (opekata mpe asaa). Ọ bụghị naanị na ọ na -adị mma ma na -atọ ụtọ, mana ọ na -adị oke mma n'okpuru uwe m niile na ọsụsọ - naanị akwa zuru oke iji mee ka ihe dị mma n'enweghị oke. Ha dịkwa oke mma. Achọpụtala m kemgbe ọtụtụ afọ na ika a karịrị nke ụdị bra ndị ọzọ m zụrụ. Enweghị m ike ikwu ezigbo ihe gbasara bra a. Bra kacha mma, wetuo aka. - Raven23, onye nyocha na Nordstrom
$ 46 $ 37 Amazon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 5/16
Kachasị mma maka nha otu obere: Wacoal na-ejikọ akwa mkpuchi akwa
Isi ihe ire ere: Ezubere maka nha pere mpe, bra a nke a na-egosi nke ọma nwere mgbakwunye mbughari maka ịkewapụta nke ọma na nkọwapụta lace aghụghọ.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Nke a bụ bra nke kacha mma m metụrụla! Anaghị m achọpụta na m nwere ya n'ụbọchị. Ọ dị oke mma arụpụtara ya na ntụsara ahụ. A bụ m naanị 5'0 'ma nwee otu egwu na -erughị 32, ọ nwere ike isiri m ike ịchọta bras nke dabara m nke ọma. Ahụrụ m nke a n'anya nke ukwuu na enwere m atọ n'ime ha ka m wee nwee ike eyi otu kwa ụbọchị. Biko meekwu agba! - LovelyMaeve, onye nyocha na Nordstrom
manicure gel vs mikpuo ntụ ntụ
$ 52 Nordstrom Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 6/16
Ikuku kacha mma: Maidenform Comfort Devotion Wire-Free Lift Bra
Isi ihe ire ere: A na-enweta ya na agba anọ na-anọpụ iche, uwe elu T-shirt a na-enweghị eriri bụ nhọrọ dị mma maka ndụ kwarantaini nkịtị, maka paịpụ ntụsara ahụ dị mma na iko nwere ụfụfụ, na-ebute mmụba dị mma maka iyi ụbọchị niile.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Kedu onye ma na ị nwere ike ịnwe bra na-enweghị waya nke dị mma, na-akwado, ma na-adọrọkwa mma? Lee ya ebe a. Nnukwu bra kwa ụbọchị nke na-adị oke mma na enweghị ihe ngosi n'okpuru T-shirts. Enwetara m abụọ ma ugbu a akwa m ndị ọzọ nọ ọdụ na -ejighị ya na drawer. Ọ naghị agbaji ụlọ akụ. Maidenform nwetara nke a nke ọma. - Pantieyum, onye nyocha na Ihe ndị dị mkpa
$ 44 Ihe ndị dị mkpa Zụta ugbu a
akpa kacha mma ụmụ nwanyị na -arụ maka ọrụ
Site n'ikike ika 7/16
Nke kacha mma na Amazon: Push-Up Lace Comfort Underwire Bra
Isi ihe ire ere: Site na ịkpụchasị agbachasị agbachasị, akwa ifuru ifuru kpuchie ya niile, yana mkpuchi maka nkwado agbakwunyere, bra a nwere ụfụfụ bụ ụdị ejiji ga-eme ka bust gị nwee iko zuru oke. Ụlọ ahịa kenha uwe ime iji mezue anya.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Nke a bụ bra nke nwere ntụsara ahụ m metetụrụ n'ahụ m. Echere m na bras dị mma ga -abụrịrị ihe jọrọ njọ ma mee ka obi gị yie pancake -m hiere ụzọ. Eriri na ụgbụ ahụ mara mma nke ukwuu, ebe ha na -akwado ma na -agba oke. Mkpịsị ahụ adịghị afụcha, iko anaghịkwa adị n'ụdị. Ọ na -enye mbuli elu karịa ka m tụrụ anya ya, nke bụ ihe ịtụnanya dị ụtọ. Aga m enye iwu karịa n'ihi na emefuola m ihe karịrị okpukpu abụọ maka bras nke na -adịghị adịte aka, ọ nweghịkwa ebe dị nso dị ka ntụsara ahụ. Ya mere echere m na nke a bụ izu ohi! - LayLay1224, onye nyocha na Amazon
$ 15 Amazon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 8/16
Agba kacha atọ ụtọ: Maidenform Push-Up Bra
Isi ihe ire ere: Ọ bụrụ na ị na -achọ agba ndị na -adịghị mma dị ka periwinkle na ụfụfụ ụfụfụ mmiri, nhọrọ lacy a sitere na Maidenform bụ maka gị. Ezubere maka mkpokọta Nkasi obi nke nwere ike ịdị ogologo oge n'uche, bra a dị arọ dị nro ma na-agbanwe agbanwe, ọ gaghị ahapụ gị ka ị dọpụ ya na nke abụọ ị na-abanye n'ọnụ ụzọ.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Enwere m nchekwube mgbe ọ bịarutere, mana enwere m obi anụrị na m jiri ohere ahụ! Ọ dị oke mma na ụfọdụ padding, mana ọ bụghị ego ihe ọchị. Enwere m akpụkpọ anụ nke nwere mmetụta ọfụma, yabụ ụfọdụ ndị na -eme bra na -enwe mmetụta na -adịchaghị mma ma na -akpasu iwe, mana nke a nwere mmetụta dị oke mma. Na -aga ịkwụsị ịzụ ọtụtụ agba n'ọdịnihu. - Megan, onye na -enyocha ya Amazon
Site n'ikike ika 9/16
Bra kacha agbanwe agbanwe: B.Tempt'd Push-Up Bra
Isi ihe ire ere: A na -enweta ya na agba ise (na -enwu gbaa ma na -anọpụ iche), bra a na -enweghị ntụpọ nwere njiri mara nke ọma na bust, enwere ike ịhazi ya ka ọ bụrụ kriscross ma ọ bụ ihe nkwụsị, na -eme ka ọ bụrụ egwuregwu nrọ gị. aghụghọ ekike anwụ.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Adị m obere na mpaghara obi, yabụ na ọ na -esiri m ike ịhụ bra nke m nwere ike mejupụta. Nke bra a dabara ụgwọ ahụ! Na mbụ ụjọ na -atụ m n'ihi na eriri ahụ dị ntakịrị ntakịrị, mana otu a na -eme ka ọ dị mma - bra a na -eme ka ọdịdị m dị oke mma na ọ na -akwado ma anaghị ahụ anya n'okpuru elu ọcha m niile. Ọ ga -akwado nke ukwuu maka ụmụ nwanyị na -esiri ike ịjuju ọtụtụ iko bra! - Casey, onye na -enyocha ya Ihe ndị dị mkpa
$ 32 Ihe ndị dị mkpa Zụta ugbu a
Nke kacha mma maka ịkpa oke: Lily of France Ego Boost Push-Up Bra
Isi ihe ire ere: N'inwe mmetụta mmụba dị egwu na ndepụta a, bra a nwere paịpụ nkwanye ugwu nke etinyere n'ime ya na iko demi underwire bụ ezigbo ihe ngosi. Isi ego maka eriri gbatịrị agbatị na -adị larịị, na -agbatị microfiber.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Ịchọta bra dị mma nke nwere ntakịrị ihe mkpuchi maka anyị ụmụ nwanyị nwere obere onyinye bụ ihe na-agaghị ekwe omume, mana bra a dị nso zuru oke. Ihe a dị nro, akụkụ ya anaghị ekekọta, ọ na -adịkwa mma n'ahụ gị. Uwe a na -agba kwa ụbọchị na -esiri ike ịchọta mana nke a nwere ntụsara ahụ n'ezie na o nwere nko atọ maka ịkpụ na azụ, nke obere akwa anaghị adịkarị. Nke a nwere ike inyere ụmụ nwanyị aka chọrọ obere iko mana mana ogologo aka ha gburugburu. Iko pere mpe, mmetụta dị oke mma, yana ezigbo padding. - Peggy, onye nyocha na Ihe ndị dị mkpa
$ 28 Amazon Zụta ugbu a
Kacha mma na-enweghị eriri: Bra's Push-Up Strapless Bra
Isi ihe ire ere: Ọ bụrụ na ị nọ n'ahịa maka nhọrọ na-enweghị eriri, tụlee ụdị a kachasị mma sitere na Dobreva. Ọ na-abịa na eriri iji gbanwee ka ọ bụrụ crisscross ma ọ bụ ihe nkwụsị, akụkụ ndị na-enweghị ntụpọ, nke nwere silicone ga-adị. Ewezuga ịbụ ndị na-ezu ohi n'okpuru uwe anwụ, iko na-enweghị ntụpọ dịkwa mma maka T-shirts.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Ahụ ara m dị ka a kpughere ha naanị afọ 18 nke ike ndọda (karịa 40) yana dịka ha azụbeghị obere mmadụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ. Ịzụta ihe dị ịtụnanya. - Lauren S., onye nyocha na Amazon
N'okpuru elu bikini n'okpuru ala
$ 23 Amazon Zụta ugbu a
Bralette Push-up kacha mma: Calvin Klein Brained Lined Bralette
Isi ihe ire ere: Nke a dị mma sitere na Calvin Klein zuru oke maka iyi kwa ụbọchị. Eriri crisscross na-ezobe ya n'okpuru elu azụ, ọ na-agbakwa okpukpu abụọ dị ka bra bra egwuregwu. Ọ bụrụ na ị nọ n'agbata nha, tọọ nke a.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Ahụrụ m bras ndị a n'anya nke ukwuu na m zụtara abụọ ọzọ. Ha zuru oke maka m, na-enwe ntakịrị ntakịrị ihe na-eme mkpọtụ na ezuru oke. Ha na -atọ m ụtọ nke ukwuu na ọmarịcha mma !! - Onye isi ndị mmụọ ozi, onye na -enyocha ya Amazon
$ 60 Zụta ugbu a
Push-Up Bra kacha mma na-emechi emechi: Victoria's Racerback
Isi ihe ire ere: Ìhè, allover padding na-enye gị mmelite na ọdịdị, na mmechi ihu na-eme ka itinye nke a-n'ụzọ nkịtị. Maka ndị ahọpụtara n'etiti anyị: bra dị n'ihe karịrị agba 30, enwere ụdị lace na ụdị adịghị mma ịhọrọ.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Enwetụbeghị m ụdị braị Victoria a ma amaghị m nkasi obi m na -achọ. Ọ mara mma nke ukwuu dabara nke ọma. Ọ na -enye m mbuli elu nke m chọrọ n'agosighị ihe anya. Ọ bara uru ịnwale… ị ga -ahụ ya n'anya! Nwa agbọghọ Florida, onye na -enyocha ya Ihe nzuzo Victoria
$ 55 Zụta ugbu a
Push-up Bra kacha dị nro: Cuup The Scoop Bra
Isi ihe ire ere: Anyị enweghị ike ikpebi ihe kacha amasị anyị gbasara bra a na-akwalite elu: akwa microfiber buttery, olu dị ala, nke gbara okirikiri, ma ọ bụ ụcha ọgaranya. Naanị anyị ga -akpọ ya eriri n'etiti ihe atọ niile - yana ịgbakwunye na ụgbọ.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Nke a bụ otu n'ime ahịrị bra kacha mma m nwara. Ihe dabara adaba zuru oke. Egbula oge ịnwale ha. Ihe dị oke nro na ntụsara ahụ. - Christella, onye na -enyocha ya Nchịkwa
$ 68 Zụta ugbu a
Kachasị mma ogologo ogologo bra: Aerie Real Power Lace Plunge Push-up Bra
Isi ihe ire ere: Ọ bụrụ na i yighị uwe ogologo ogologo, nke a bụ isi okwu: Ha na -enye gị nkwado na nhazi. Nke a ogologo-efegharị efe ara bụ ọpụrụiche. Na mgbakwunye, lace ahụ mara mma nke ukwuu.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Enwere m obi anụrị na m kpebiri ịzụta bra a; Enweghị m ike ịhụ onwe m mgbe m na -azụta bra si ebe ọ bụla ọzọ. Bra na -adabara n'ụzọ zuru oke, na -enye ihe ịpịpị na -enweghị oke padding ma ọ bụ ahụ erughị ala, ọ mara mma nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị nwere abụba azụ nke na -esikarị n'úkwù gị apụta dị ka m na -eme, bra a na -arụ nnukwu ọrụ ikpuchi nke ahụ n'ihi oke egwu. Ọ bụ bra nke nwere ntụsara ahụ nke na -emegharị azụ m ntakịrị, enwere m obi anụrị na ịzụrụ m. —Bachelorette, onye na -enyocha ya Ụda
bra -push -up bra - tinye nha iko 2
Egwuregwu Push-Up kacha mma: Athleta nabatara Heather Bra
Isi ihe ire ere: Egwuregwu bra nke ahụ… mara mma? Ọ ga -akara gị mma ikwere ya. Nke a nwere iko a kpụrụ akpụ maka oomph ọzọ, ebe ụdị uwe ogologo ahụ na -enye nkwado dị mma. Ego: Ọ dị ịtụnanya naanị ma ọ bụ kpuchie ya n'okpuru T-shirt.
Ihe ndị ahịa na -ekwu: Bra bra egwuregwu a dị ezigbo mma ma nwee naanị nkwado kwesịrị ekwesị nke achọrọ na -enweghị eriri. Emere nke ọma ma dị nro na akpụkpọ ahụ. Enwetara m ya na agba 3 dị iche iche. Akwa zụrụ! - Barbara, onye na -enyocha ya Onye egwuregwu
$ 54 Zụta ugbu a
Ọdachi nke otu abalị (ma ọ bụ atọ)
Ihe iriba ama iri abụọ oku ọkpụkpọ gị na -atụgharị ịbụ ezigbo mmekọrịta
Egwu 20 kachasị mma nke na -anọchite anya oge ọkọchị 2013
Anya kacha dị ịtụnanya sitere na Haute Couture Fall 2018
Nkwupụta 10 na -akpali akpali iji mee gị obi ụtọ mgbe ezumike gachara
esi tufuo ọnyá n'ụkwụ
ashley benson na cara delevingne
esi ebipụ eserese bangs